Ihe kacha mma 24 Na-adabere na Echiche Ebumnuche Echiche Echere Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kacha mma 24 na-adabere na Ebumnuche Echiche Ebumnuche nke Ear
Chọta ma zoputa kachasị mma n'azụ umuntakiri ntị. Naanị obere edemede obere akara ntachi anya na-egbu egbu maka gị.
1. Top Behind Ear Tattoos
N'oge na-adịbeghị anya, egbu egbu dị ka n'azụ #ear tattoos aghọwo ihe ọtụtụ mmadụ na-eji eme ihe n'èzí.
2. Ọ dị mma na-egbuchi egbugbere ọnụ
Ị rarala akpụkpọ ahụ, ọ ga-adị mma ka ị mara mma a na-egbu egbu egbu. Ụdị #tattoo dị ka nke a nwere ike ime ka ị pụọ n'ìgwè ahụ. Kedu ihe ị chere?
3. Ifuru Na-akpata Ụdị Egwu Ụdị
A n'azụ egbugbere ntị nwere ike iji ejiji mara mma. E nwere ụdị okooko osisi dị iche iche nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche inweta egbu egbu a dị egwu maka onwe gị.
4. Ọkpụkpụ Na-akpata Ụdị Mgbapụta
Otu obe n'azụ egbu egbu na-aghọ otu egbugbu nke ga-agbanwe ndụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ nwere ọtụtụ ihe dị mkpa ka onye na-ekpughe ya. Nke a bụ ihe mere ị ga - eji nwee ike iji akara egbu egbu a.
5. N'ịbụ onye na-adọrọ mmasị n'azụ ntị
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ibu ibu n'azụ egbu egbu mgbe ahụ, ọ ga-enye aka karịsịa ịchọpụta ebe ụfọdụ ị nwere ike ịnweta ọnwụ na ọnụego ọnụ. Mgbe ị na-eme nke a, ọ ga-adị nnọọ mfe inwe egbu egbu nke ntị ọ bụla.
6. Ụdị Kasị Mma Na-akpata Ụdị Egwu Ụdị
N'ihu n'ihu na teknụzụ, ị nwere ike ịnwe ihe mara mma n'azụ egbu egbu. Enwere ọtụtụ #designs maka ụdị egbu a. Mgbe ị na-egbu egbu a, ọtụtụ ndị ga-ejide gị.
7. Behind ear tattoo
E nwere ọtụtụ ebe dị mma ebe ị nwere ike ịnweta egbu egbu. Ọnwụ ahụ aghọwo otu n'ime ndị a ma ama gburugburu ụwa na imewe adịghị ewe oge iji gwụchaa ọnụ ọnụ.
8. Isi okpuru n'azụ egbu egbu
Ị hụla ndị nwere ụdị a n'azụ egbu egbu? Kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ mmadụ ndị ọhụrụ na-egbu egbu egbu juru ndị mmadụ anya ịhụ ụdị egbu egbu nke na-adabere n'azụ ntị.
9. Mfe n'azụ egbu egbu
Taa, anyị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta n'ụzọ dị ịtụnanya na ihe dị ịtụnanya n'azụ ụda egbugbere ọnụ ntị n'ihi ịma mma ha nwere.
10. N'anya n'azụ ntị egbu
Nkọwa n'azụ egbu egbu ntị aghọwo ihe onye ọ bụla chọrọ ịmata. Ụzọ e si kee ya na-eme ka ọ dị jụụ iji nweta ya n'agbanyeghị agba agba.
11. Ochie n'azụ egbu egbu
Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ịchọta arịlịka n'azụ ntị egbugharị aghọwo ihe ndị ọzọ chọrọ inweta. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ọmarịcha ịma mma na ọ na-ele onye na-ekiri ya.
12. Ọtụnanya n'azụ egbu egbu
Mgbe ị na-atụgharị anya n'azụ egbu egbu, ị pụghị inyere ma gosi ya onye ọ bụla nọ gị gburugburu. Nke a bụ ihe mere ị ga-eji jide n'aka na ị nwere ihe mara mma.
13. Star n'azụ egbu egbu
Anyị ahụla ndị na-akwa ụra maka igbu egbu ma mgbe ha nwere kpakpando n'azụ egbugbu ntị, ihe niile gbanwere. Nke a bụ ihe mere anyị ji ahụ ọtụtụ ndị na-aga igbu egbu a.
14. Ukwu n'azụ egbu egbu
Enwere otutu uzo di iche iche na-acho akwa a n'azu egbu egbu. Otú ọ dị, iji ọrụ nke onye na-egbu egbu na-eme ka ọ baa uru.
15. Ifuru n'azụ egbu egbu
Okpuru n'azụ egbu egbu egbughi amalite taa. A na-ahụkarị ọtụtụ ndị na-ahụ maka igbu egbu na-adọrọ mmasị na egbugbu a.
16. Fairy n'azụ ntị egbu
Enwere otutu uzo n'uwa dum. Otú ọ dị, ọ bụ gị ga-ahọrọ ụdị ịkụ azụ nke a ga-eji n'azụ ntị gị.
17. Nri n'azụ egbu egbu
Nduru bụ anụ ndị mara mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye udo, jide n'aka na ị nwere nduru ahụ n'azụ egbu egbu nke ghọworo ngwá agha zuru oke iji dozie ọtụtụ nsogbu nke ndụ.
18. Ntuchi n'azụ egbu egbu
Ịgbu egbu a na-amasị gị? Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike iji nkwuwa okwu kwuo onwe gị otú stampụ a na-egbuchi egbuchi egbugbere ọnụ maka gị mgbe a nabatara ya.
19. Nwa nwanyị na-ada azụ n'azụ ntị
Ihe ohuru a na-eji eme ihe n'ikike a na-emechi egbugbu egbu egbu kacha mma ka egosiputa ya site n'itinye onwe gi.
20. Rose n'azụ egbu egbu
Ugbu a, ị hụla ihe mere ọtụtụ ndị ji eji rose bilie n'azụ ntị. Nhazi ahụ mara mma nke ukwuu, ọ dịghịkwa otutu oghere.
Hụ ụzọ nke a n'azụ ntị iku anya yiri. Ọ bụ naanị ndị nwere ịhụnanya maka egbu egbu nwere ike ịghọta egbugbu a.
21. Smart n'azụ egbu egbu
N'ọzụ ntị egbu egbu aghọwo otu n'ime ọtụtụ tattoos na nwanyị ọ bụla nwere ike iji ya mee ihe.
22. Mkpesa n'azụ egbu egbu
23. Ube n'azụ egbu egbu
Ọ bụrụ na ị ga-atụle ịbịakwa nku n'azụ egbu egbu, ị kwesịrị ịhapụ ohere iji mee ka obi sie gị ike na ị nwere ihe kachasị mma.
24. Blue Red Star n'azụ egbu egbu
25. Ụdị okooko osisi na-acha mma mmiri na-egbuke egbuke na-acha azụ mmiri n'azụ ntị maka ụmụ agbọghọ
egbu egbu mmirizodiac akara akarana-adọ aka mmaegbu egbu osisi lotusọdụm ọdụmenyi kacha mma enyiegbu egburip tattoosakara ntụpọnnụnụEgwu ugookpueze okpuezeegbu egbu ebighi ebiegbugbu egbugbun'olu oluaka mma akaegbu egbu maka ụmụ nwokeazụ azụNtuba ntugharikoi ika tattoomma tattoosima ima mmandị na-egbuke egbukeechiche egbugbuaka akaAnkle Tattoosakwara obiUche obiudara okooko osisiegbu egbu okpudi na nwunyena-egbu egbuGeometric Tattoosụkwụ akaỤdị ekpomkpaọnwa tattoosegwu egwundị mmụọ oziaka akaegbu egbu diamondmehndi imeweụmụnne mgbungwusi pusiegbu egbu hennaenyí egbu egbuarịlịka arịlịkaegbu egbu egbuakpị akpịagbụrụ eboegbugbu maka ụmụ agbọghọ